2019-09-07 | Job Vacancy in Myanmar
2019-09-07 22:08:26 , မန္တလေး 78*33 အနီးဝိုက်ရှိ IT…
မန္တလေး 78*33 အနီးဝိုက်ရှိ IT Co., Ltd တွင် လုပ်ကိုင်ရန်
✴ Sale & Marketing Supervisor – မ(၂)ဦး လစာ – 300000 – 350000 ks သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူ Way Plan ဆွဲနိုင်သူဖြစ်၍ team တခုကို ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသူ
✴ Sale & Marketing – မ(၃)ဦး လစာ – 200000 + ညှိနှိုင်း သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိသူ အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ကိုင်နိုင်သူ
ကျန်အသေးစိတ်များကို အင်တာဗျူးတွင်ညှိနှိုင်း Phone – 09693021548 (Viber) သို့ ဖောင်နှင့်တကွ အလုပ်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-09-07 by admin.
2019-09-07 22:08:24 ,Agency တစ်ဆင့်ခံမဟုတ်ပါ။Compan…
Agency တစ်ဆင့်ခံမဟုတ်ပါ။Company မှ တိုက်ရိုက်ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ Shopping Centerတွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Counter Shop နှင့် Show Rooms (အရောင်းဆိုင်) များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
👩🏻‍💼Sales Promoter(Beauty Adviser) မ (10) ဦး အမြန်အလိုရှိသည်။
– အသက် 18 နှစ်ပြည့်ပြီး 30 နှစ်ထက်မကြီးသူဖြစ်ရမည်။
-Company မှ ချမှတ်ထားသောစည်းကမ်းချက်များအားတိကျစွာလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
– ရန်ကုန်မြို့တွင်းရှိ တာဝန်ကျရာ မည်သည့် Supermarket နှင့် Outlet Shop တွင်မဆို တာဝန်ချလျှင် အလုပ်ဆင်းပေးနိုင်ရမည်။
– တစ်ပါတ် လျှင် နားရက်(1) ရက် အလှည့်ကျရမည်။
လစာ 180,000 -200,000 (ရောင်းကြေးပြည့်မှီပါက Incentive ရမည်။)
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက 09454777703,09454777704 ကို Monday မှ Saturday (9:00 Am မှ 5:30 Pm) ရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
CV form ကို Viber မှ ပေးပို့လိုပါက 09454777704 ကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
လူကိုယ်တိုင် လာရောက် လျှောက်ထားလိုသူများသည် ယနေ့မှ စ၍ တစ်ပတ်အတွင်း ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်းတစ်စုံ၊ဓါတ်ပုံ(၂)ပုံ၊ အထောက်အထားမိတ္တူအပြည့်အစုံနှင့်တကွ အမှတ် ၅၄၊ပထမထပ်၊သီတာလမ်း၊ကြည့်မြင်တိုင်သို့ မနက် ၉ နာရီမှ နေ့လည် ၁၂ နာရီအတွင်း လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
2019-09-07 22:08:10 ,Please admin. We are hiring no…
Please admin. We are hiring now.📢📢📢
2019-09-07 22:08:02 ,Please admin တင်​ခွင့်​ပြုပါ …
Please admin တင်​ခွင့်​ပြုပါ
Urgent position – Accountant. Female (1) post
2019-09-07 22:07:10 , Education Industry Myanmar …
🔍 Education Industry 🔎
One of the International School is looking for below positions in Myanmar. Interested candidates, please send your updated resume to 📩info@vacancymyanmar.com 📳 09 777 001 840 (Ms Rachel)
🔷Outstanding communication and interpersonal skills 🔷Languages: English (Good)
2019-09-07 22:06:21 ,၁၀တန်း study guide လုပ်ပါတယ် …
၁၀တန်း study guide လုပ်ပါတယ်
မြန်မာစာ အင်္ဂလိပ်စာ physics biology သင်ပါတယ်
Chemistry က organicနောက်ပိုင်း သိပ်မမှတ်မိတော့လို့ပါ
2019-09-07 22:05:33 ,Please Admin!တင်ခွင့်ပြုပါ။
2019-09-07 17:55:25 ,လှိုင်သာယာမြို့ နယ်ရှိ Plastic …
လှိုင်သာယာမြို့ နယ်ရှိ Plastic ထုတ်လုပ်ဖြန့် ချီသည့် Company ကြီးတစ်ခုမှ ခေါ်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဖြစ်ပြီး Ferry+Uniform ခံစားခွင့်ရှိပါသည်။
အင်းစိန်၊ ဘုရင့်နောင်ဘက်တွင်နေထိုင်သောသူများအတွက် အခွင့်အလမ်းကောင်းဖြစ်ပါသဖြင့်အမြန်ဆုံးလျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။ အလုပ်ချိန်မှာ (8:30-4:30) ဖြစ်ပြီး အစိုးရရုံးပိတ်ရက်နှင့်တနင်္ဂနွေပိတ်ပါသည်ရှင့်
1. Warehouse Manager (Hlaing Thar Yar) M (1) Post
-Exp5yr
-Can use AX Software
-Salary 7-8 Lakhs
-Working hour (8:30-4:30)
-Provide Ferry (Ferry Stop at Insein)
-Holiday (Gazette Day, Sunday)
2. Purchasing Staff (Hlaing Thar Yar) M/F (1) Post
-Can use Software
-Exp2yr
3. Sales Associate F (2) Post
Location မှာအလုပ်ဝင်ရမည့် မြို့ နယ် နေရာများကို ရေးပေးထားပါတယ်။ အနီးစပ်ဆုံးမြို့ နယ်များ အလုပ်ဝင်တာပိုအဆင်ပြေကြတာမို့ ဖော်ပြ ပေးထားပါတယ် ။
လုပ်ငန်းအ တွေ့အကြုံ နဲ့တစ်ချို့ နေရာတွေမှာအလုပ်ဝင်ရမယ့်လုပ်ငန်းပိုင်းတွေ ဖော်ပြ ပေးထားတာမို့ 
ကိုက်ညီမယ့်လုပ်ငန်း၊ပညာရပ်နဲ့ လျှောက်ထားပေးးဖို့ နဲ့လုပ်ငန်းမကိုက်ညီပါက အင်တာဗျူးအတွက်အချိန် ကြာမြင့်နိုင်ကြောင်း သိရှိစေလိုပါတယ်။
အပတ်စဉ် အချိန်နဲ့ တ ပြေး ညီ ၇ာထူးနေ၇ာများဖော်ပြ ပေးနေတာမို့
တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူး page လေးကို like လုပ်ထားခြင်းဖြင့်လူကြီးမင်းများ
အလို၇ှိ၇ာ အလုပ်ကောင်းများကို သိ၇ှိနိုင်ပါပြီ။ တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူး မှာ
Re-command စာလေးတွေလည်းအဆင်ပြေရင်ရေးပေးခဲ့ ကြပါဦးလို့ ပြောကြားလိုပါတယ်။
အလုပ်လျောက်လွှာများကို word file ဖြင့်သာပေးပို့ပါ၇န်နှင့် Viber မှ လျောက်ထားပါက ၇ှင်းလင်းပြတ်သား သောဓာတ်ပုံ၇ိုက်ပေးပါ၇န် လေးစားမှုနဲ့ပန်ကြားလိုပါသည်။အ တွေ့အကြုံ၇ှိပါက Duties and Resopnsibility များကို သေချာ တပါတည်း ထည့်ေ၇းပေးစေ လိုပါတယ်။ဆက် သွယ်၇မယ့်ဖုန်းနံပါတ်ကို အနည်းဆုံး ၂ ခု ထည့်သွင်းဖော်ပြ ပေးစေလိုပါတယ်။
Office New address – No.294,First floor,Yankin Street,Thingankyun Township.
(Ba Wa Myint Bus Stop)
Contact Phone – 09692214906,09401579330,09796740335
2019-09-07 12:12:19 , Wedding Shop (မင်္ဂလာဝတ်စုံ)ဆိ…
🔴Wedding Shop (မင်္ဂလာဝတ်စုံ)ဆိုင်တွင် လုပ်ကိုင်ရန် အမျိုးသမီး( ၂) ဦး အလိုရှိသည်။🔵 ———————————————————–
🔶နေစားငြိမ်း🔷လစာ +bonus+ Tip Money🔶အလုပ်ချိန် (နံနက် ၁၁ ~ည ၈ )🔷ပညာအရည်ချင်းမလို(လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်ရှိရမည်။)🔶အနည်းဆုံး ၃ လလုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည်။🔷ရေရှည် လုပ်က်ုင်ပါက fashion နှင့်ပတ်သတ်သော ဘာသာရပ်များကို free သင်ကြားပေးမည်။🔶Fashion အမြင်ရှိပါက ဦးစားပေးမည်။🔷စကားပြောချိုသာသောသူ ဦးစားပေးမည်။🔶ရင်းနှီးစွာဖြင့် မိသားစုလိုဆက်ဆံမည်။🔷မှတ်ပုံတင် သန်းခေါင်စာရင်း ယူလာပါရန်
2019-09-07 12:12:15 ,Stream Net Co., Ltd (Fiber Int…
Stream Net Co., Ltd (Fiber Internet Service)တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလို
1. Sale Admin – Female (1) post
– must be fluent in english(4 skills)
2.Sale and marketing assistant – Male (1) post
– Related certificate or Diploma
– At least one year experience (We can consider about fresh graduates depend on self-confidence )
– Age between 20-27 years
3. After sales staff – female (1) post
– Have experience in S &M field(more prefer)
– Must be fluent in English (4 skills)
ရုံးလိပ်စာ- ၂၇လမ်း၊၇၆-၇၇ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့။
Email address- mdy.hr@streamnet.com.mm
Ph no. – 09771890576/ 09687936544
Off day-Sun and gazzated day
လျှောက်ထားလိုပါက CV formနဲ့ အတူ အခြားလိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများနှင့်တကွ Emailပို့၍ဖြစ်စေ ၊လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ ၊ VBမှာဖြစ်စေ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
** Shorlist ထဲတွင်ပါဝင်သူများအား အင်တာဗျူးအမြန်ခေါ်ပါမည် **
2019-10-14 10:59:16 , ​ရွှေအ​ရောင်းအဝယ်လုပ်ခြင်းကိုစိ…
2019-10-14 09:44:24 , မင်္ဂလာပါရှင်… Vacancy Myanmar…
2019-10-13 21:58:49 ,
2019-10-13 21:57:40 ,
2019-10-13 21:57:37 ,နစေ့ဉျ 10 ထုပျအထကျပို့နိုငျရမည…